शासकहरू देखाउन वा लुकाउन,View - Rulerछनौट गर्नुहोस्। ठाडो शासक देखाउनको लागि, चयन गर्नुहोस् LibreOffice - PreferencesTools - Options - LibreOffice Writer - View, र त्यसपछि Vertical ruler Ruler क्षेत्रमाl
पृष्ठ सीमान्तहरू समायोजन
पृष्ठको सीमान्त रुलरहरूको अन्त्यमा भरि क्षेत्रहरूद्वारा दर्साइन्छ.
तेर्सो रुलरमा तीन वटा सानो त्रिभुजहरू सँग इन्डेन्टहरू समायोजन गरिन्छ.
बायाँ वा दायाँ अनुच्छेद इन्डेन्ट परिवर्तन गर्न, अनुच्छेद(हरू) चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ इन्डेन्ट प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, तल बायाँ वा तल दायाँ नयाँ स्थानको तेर्सो रुलरमा तान्नुहोस्.
चयन गरिएको अनुच्छेदको पहिलो पङ्क्ति इन्डेन्ट परिवर्तन गर्नका लागि, नयाँ स्थानको तेर्सो रुलरमा माथिल्लो बायाँ त्रिभुज तान्नुहोस्.
तेर्सो रुलरको जहाँ पनि तपाईँ डबल-क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, र अनुच्छेद संवादमा इन्डेन्टहरू समायोजन गर्नुहोस्.
Title is: रुलरहरू प्रयोग गर्दा